လေထုလွှတ်ပေးရန်အဆို့ရှင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ လေထုလွှတ်ပေးရန်အဆို့ရှင် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. အရည်အသွေးမြင့်မားအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ လေထုလွှတ်ပေးရန်အဆို့ရှင်။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစည်းသည့်ပို့ကုန်-oriented စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြ၏။ နိမ့်ကျမှုကြောင့်အလုပ်သမားစရိတ်နှင့်အနုပညာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏မြင့်မားသောကျွမ်းကျင်လုပ်သားအင်အား & ပြည်နယ်မှကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းမှာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်တို့သည်ငွေကိုတန်ဖိုးပေးနိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုထူထေ​​ာင်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အားဖြင့်ဖြစ်စေ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်နှင့်အိမ်ပြည်ပမှာအားလုံးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်သက်. တိုင်း client ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတန်ဖိုးထား
သူတို့ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည့်အရေးကြီးသောခြေစွပ်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သစ်ကိုရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကသုတေသနလုပ်ဖို့မကြောင့်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Corporate Plan အမျိုးမျိုးမှကြိုဆိုပါ၏ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - ALL STAINLESS STEEL No. 11AV
DSC အားလုံးသံမဏိ float အမျိုးအစားအမျိုးအစားလေဝင်လေထွက်
●MOP 28K x ကို 260̊ဂ.
●pump ၏ထိပ်တွင် DSC Float အမျိုးအစားလေဝင်လေထွက်တပ်ဆင်,စုဆောင်းထားသောလေထုကိုပပျောက်စေရန်ပိုက်နှင့် tank.
●LIGHT AIR သည်လေထဲသို့ရောက်သော်ထိုင်ခုံနှင့် Valve ဖွင့်သည်,လေကိုရေထဲသို့ရွေ့လျားမှီတိုင်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ်လေဝင်လေထွက်နိုင်ပါတယ်.FLOAT သည်ရွေ့လျားပြီးထိုင်ခုံနှင့်နီးရန်လီဗာရှိသည်,အဆို့ရှင်
●ပိုမိုကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုအတွက်အပြည့်အ ၀ စတီယာရင်နှင့် INLET.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/air-release-valve.html